Tag: Dibada | Sagal Radio Services
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo deg deg Muqdisho u yimid, kaddib bilo uu dibada ku shaqeynayay
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa deg deg u soo galay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, maalmo kaddib markii la doortay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda oo maanta Xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dowladda China .
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga H.E. Khaled Omar Ali ayaa maanta ku qaabilay Xafiiskiisa Ergey gaar ah oo ka socda Madasha Iskaashiga China-Africa ( Focac) H.E. Mr. Liu Guijin oo ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda , ammaanka iyo fulinta mashaariic horumarineed .
Wasiirka Arrimaha Dibadda Iyo Wafdi Ay Hoggaamineyso Oo Maanta u Ambabaxay Dalka Belgium
Ra’isalwazaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi ay hogaamineyso ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha caalamiga ah Aadan C/lle Cismaan ee magaaladda Muqdisho iyadoo ku sii jeedda magaaladda Brussells ee xarunta dalka Biljamka.
FOWZIYO YUUSUF: “Xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanku waxay isku raaceen in la tageero Ciidamada Soomaaliya”
Wasiiradda arrimaha dibadda Somalia, ahna ra’iisul wasaare ku xigeen, Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegtay in golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ogolaadeen in in la taageero ciidamada xoogga dalka iyo kordhinta ciidamada AMISOM.